Akụkọ - Akụkọ ihe mere eme nke ịnwụ anwụ.
Akụkọ ihe mere eme nke ịnwụ anwụ.
Ọmụmaatụ mbụ nke ịnwụ nkedo site na ntụtụ nrụgide – na-emegide nkedo site na ike ndọda – mere n'etiti 1800s. Enyere Sturges patent na 1849 maka igwe mbụ ejiri aka rụọ maka ụdị mbipụta nkedo. Usoro a bụ naanị ụdị ngwa nbipute maka afọ 20 sochirinụ, mana mmepe nke ụdị ndị ọzọ malitere ịbawanye na njedebe nke narị afọ. Ka ọ na-erule 1892, ngwa azụmahịa gụnyere akụkụ maka phonograph na ndekọ ego, na mmepụta nke ọtụtụ ụdị akụkụ malitere na mmalite 1900s.
Ihe nkedo nke mbụ na-anwụ anwụ bụ ihe dị iche iche nke tin na lead, ma ojiji ha jụrụ site na iwebata zinc na aluminum alloys na 1914. Magnesium na ọla kọpa alloys sochiri ngwa ngwa, na ka ọ na-erule 1930s, ọtụtụ n'ime alloys ọgbara ọhụrụ a ka na-eji taa ghọrọ. dị.
Usoro nkedo anwụ esitela na usoro ịgba ntụtụ mbụ dị ala ruo na usoro gụnyere nkedo nrụgide dị elu - na ike karịrị 4500 pound kwa square inch - nkedo nkedo na nkedo siri ike siri ike. Usoro ọgbara ọhụrụ ndị a nwere ike iwepụta iguzosi ike n'ezi ihe dị elu, na nso ihe nkedo ụdị ụgbụ nwere ọmarịcha elu.
Nke gara aga: Ihe ọmụma nke ngwaahịa nkedo ígwè.
Osote: Mkpa nke ịnwụ nkedo anwụ imewe.